Programka sirta – Category – Windows – Vessoft
Programka sirta – Windows
Programka sirta Internet Software ee booqashada ku qarsoodi ah websites internet-ka. Software wuxuu taageeraa technology gaar ah oo sir ka kala iibsiga xogta iyo macluumaadka ka dhinac saddexaad.
Programka sirta Internet software ah ee xidhiidhka la ilaaliyo iyo fadhiyada web ammaan ee internet-ka. Qarsoodiga ah ee wax hawlaha online waxaa lagu gaarayaa by isbedelka of the user ee IP-address.
Programka sirta Internet Software inay la shaqeeyaan teknoolajiyada VPN ah. Software waxay leedahay qalab in la abuuro channel Windows XP sida dhibic-ka-barta ama server-ka-macaamiisha.
Programka sirta Internet Software si ay u helaan in ay internetka hor istaagay oo gab faafreebka internet-ka. Sidoo kale software awood u si ay u ilaaliyaan xisaab user iyo sirta ka dhanka ah jabsiga ah.
Programka sirta Internet Waxay hubisaa joogo qarsoodi ah oo amaan ee internet-ka. software wuxuu isticmaalaa gaar ah kaydinta daruur si sir weydiimaha internet-ka.
Programka sirta Internet Aalad uu siinayaa in software shabakadda awood u leh inay ka shaqeeyaan iyada oo loo marayo server wakiil ah ay dhacdo in ay maqnaayeen. Sidoo kale software marayaa xadka brannmur oo awood u si ay u qariyaan IP-address.
Programka sirta Saxannada Ku haboon qalab inay la shaqeeyaan DVD drives. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ka boodo ilaalinta DVD iyo nuqul ka kooban yahay sida uu u qabtay faylasha ama image ISO.